WOWOW Lohataona ara-barotra misintona ravin-dakozia miaraka amin'ny Sprayer, mialoha ny fanasan-damba Chrome Pot Filler
Home / Fitaovana an-dakozia / Sintomy ny fako an-dakozia / WOWOW Lohataona ara-barotra misintona Faucet ao an-dakozia miaraka amin'ny Sprayer, mialoha ny fanasan-damba Chrome Pot Filler
Fananganana varahina mafy - Ny faucet mameno vilany mavesatra dia vita amin'ny varahina mafy ary 9.7 Ibs. Ny fantsom-bozaka an-dakozia vita amin'ny lakozia miaraka amina famaranana Chrome dia harafesina, harafesina, mahatohitra tondra-drano, ary miantoka ny fiarovana ny rano sy ny androm-piainana lava.
Maody 2 - Ny lohan'ny Sprayer mialoha ny fanasan-damba dia manolotra tsifotra mahery setra avo be hanaparitahana ireo sisa tavela amin'ny sakafo, afaka mivelatra hatrany amin'ny tsindry iray amin'ny tahony izy ary tsy mila mitazona izany. Fomba ahodina hamenoana ireo vilany sy vilany be ao anatin'ny minitra vitsy. Afaka miasa miaraka amin'izay izy ireo ary mihodina manodidina ny 360 ° izay mahomby kokoa amin'ny fandrahoana sakafo.
Hetsika am-pamolavolana - Ny fantsom-bokatra mihodina 360 ° mahery dia manome toerana malalaka ho an'ny asa ao an-dakozia - fanadiovana, famenoana, sns. Famolavolana fikirakirana tokana 90 ° azo ovaina mba hifehezana ny hafanan'ny rano sy ny habetsahan'ny fikorianany amin'ny fotoana iray.
Mora ny mametraka - Fametrahana lavaka 1 na 3. Manome anao torolàlana amin'ny antsipiriany izahay, kojakoja fametrahana ary fitaovana, ao anatin'izany ny takelaka fisaronana, hosotra rano tucai 0.5m amin'ny fiantohana kalitao, fonon-tànana sns. Fametrahana mora irery fa tsy misy plumber.
Serivisy ho an'ny mpanjifa - Saron'ny fiverenana maimaimpoana 90 andro sy fiantohana 5 taona. Raha tsy faly amin'ny fanontaniana ianao dia azafady mifandraisa aminay.
Tanana tokana mora kokoa amin'ny fifehezana
Faucet an-dakozia tokana tokana, azonao ampiasaina amin'ny tanana iray ihany, mba hifehezana ny fikorianan'ny rivotra na ny mari-pana.
Ny fomba maoderina dia mifanaraka amin'ny trano fisakafoanana ara-barotra, trano, trano fandraisam-bahiny, trano fonenana, sy ny sisa.
ABS Aerator dia manome rano malefaka
kalitao ABS Nozzle
Fikasihana malefaka amin'ny rantsantanana hanesorana ny mizana sy ny kalsioma
Mora diovina, tazony ny fenitry ny fiainana sy ny rano ampiasaina
Spouts roa misaraka
Mijanona amin'ny fanindriana iray amin'ny tahony ny famafazana mialoha, ka tsy voatery hihazona azy foana ianao.
Ny sprayer alohan'ny kobanina dia manome rano misy tsindry mafy hanadiovana ny tasy
Ny famenoana vilany dia manome fikoriana malefaka sy malefaka, tsy misy splash
Ny spouts roa dia azo alefa miaraka
Mihodina 360 degre
Samy afaka mihodikodina manodidina ny 360 degre ny spouts roa, izay mitsitsy toerana bebe kokoa ary mahatonga ny fahandroana hahomby kokoa.
Ny spouts roa dia azo alefa miaraka, izay manatsara ny fiainanao an-dakozia.
Sandry varahina kalitao
Ny lohan'ny famafazana alohan'ny fanasan-damba vita amin'ny varahina mivaingana dia matanjaka, miorim-paka ary tsy hilentika.
Afaka mijanona eo amin'ny fanindriana iray monja amin'ny tahony ny fanerena mialoha ny fanasan-damba
Tsy ilaina ny maka tanana, ary afaka manao zavatra hafa amin'ny tananao malalaka.
Ampahany : 2312000C Sokajy: Fitaovana an-dakozia, Sintomy ny fako an-dakozia
33.1 x 12.7 x 2.8 santimetatra
Fiantohana voafetra 5 taona